Warmly Welcome: လူပေါင်းမှားပြီ
အဟေး .. .. နာနဲ့ ဒူတယ်ဂွ။
ငါ့လို လူသားတွေ အများကြီးပါ pro ရေ. ။
အားငယ်ပါနဲ့ .. ..
ငါလိုလူ ဇဗ္ဗူမှာ မရှားဘူးဟေ့လို့ ကြွေးကြော် လိုက်သလိုပါပဲ။ ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေပါ။
အဆင်ပြေသွားပါမယ်။ နောက် တစ်နှစ်ပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။
ဂျီတော့ခ် သုံးတာများသွားလို့ ဂျီပြသနာ ဖြစ်နေတာ ဖြစ်လောက်တယ်... ဂျီတော့ခ် နည်းနည်း လျော့လိုက်...း)
အဲလို ဒုက္ခခံပြီး လာလာလည်တတ်လို့
ဂျီပြသနာကတော့ ကိုအောင်သာငယ် ပြောသလိုပဲ ဖြေရှင်းလိုက်ပါ။..:P
အာ..အထိုင်များရင် ဂျီရှောတယ် ဟုတ်လား
တကယ်လားဟင်. ဒုတ်ခ ပါဘဲ။
ဖတ်ရင်းပြုံးမိတယ်၊ ဂျီရှောတယ်ဆိုလို့ပါ၊ ကျနော်ဆို ဂျီကိုပျောက်နေတာ၊ ဂျီပါတာတွေ နည်းနည်းရှောင်လိုက်ရင် ဂျီပြန်တက်လာမှာပါ ဘော်ဒါကြီးရေ ၊ ကွန်နက်ရှင်မကောင်းတဲ့ ကြားထဲကကို စီဘောက်တို့ ကွန်မန့်တို့ကို မရရအောင်ပေးသွားတတ်တဲ့ ခင်မင်တတ်တဲ့ စေတနာကို မလေးစားဘဲနဲ့ကိုမနေနိုင်ဘူး။ ဂျီပြန်တက်ပါစေဗျာ.......
ကိုဝင်းဇော်ပြောမှပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ကြည့်မိတယ်
ဟုတ်နေပြီလားပေ့ါ။ ဘာမှလည်း မဆိုင်ဘူး
ရုံးမှာ အထိုင်များလို့ ဖြစ်တာပါတော်..
၀င်းဇော်ရေ ကြိုပြောပေါ့ကွ ငါ့မှာ ကီးဘုတ်အပို ရှိတယ်ကွ။ ဂျီကိစ္စတော့ ငါနဲ့မဆိုင်။
hehehe.. ဖြစ်ရတယ်နော် .. :P
အကိုရေ ဒီလို မရတဲ့ကြားက ဒုက္ခတွေကြားကနေ လာလည်တဲ့ အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်တွင်းက ဘလော့ဂါများကို လေးစားဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ကျနော်ဆို ဘာမှ လုပ်တတ်မှာတောင် မဟုတ်ဘူး
တောင်ပေါ်သား ပြောသလိုပဲ။ အခက်အခဲတွေကြားက လာလာလည်တိုင်း ကျေးဇူး အထူးတင်မိပါတယ်။
တွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်... :)
ဇော်ရေ... ဘာမဆိုင် ညာမဆိုင် အစ်မနာမည်လဲပါတယ်..ဟဟား
လိုင်းမကောင်းတော့ စိတ်ညစ်စရာပဲ တစ်နေကုန် ဂိမ်းပဲ ကစားဖြစ်တယ်။